भक्तपुरको भाटभोटेनी सुपर मार्केटदेखि स्यामसुङ कम्पनी पूरै डुबानमा !
भक्तपुर, २८ असार-गए राति परेको भीषण वर्षाका कारण हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले भक्तपुर र मध्यपुर डुबानमा परेका छन् ।
यता मनोहरा खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पसेपछि जडीबुटीस्थित सुकुम्बासी बस्ती पूरै डुबानमा परेको छ । घर बाहिर निस्कन पनि नसक्ने र घरभित्रै बस्न पनि नसक्ने अवस्थामा परेको यहाँका बासिन्दा अमर थापाले बताउनुभयो ।रासस
सरकारबाहिर कांग्रेसको १ वर्ष : छायाँ सरकार छायाँमै सीमित !
सम्बोधनमा गीत भन्दा चिप्लिएछन् ओली, कांग्रेसले औंल्यायो गम्भीर गल्ती